BlueStacks တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန် - BlueStacks2ကို PC / Mac ကို / Laptop ကိုများအတွက်အခမဲ့ Download / Windows XP ကို ​​/7/ 8.1 / 10
Windows ကိုများအတွက် BlueStacks BlueStacks သိကောင်းစရာများ badmin 51053 Views စာ7မှတ်ချက်များ	29 / 05 / 2018
သငျသညျရဲ့ features တွေကိုအားဖြင့်အံ့သြနေကြသည်ပြီးတာနဲ့ BlueStacks App ကို Player ကို သငျသညျမှစောင့်ဆိုင်းမည်မဟုတ် အခမဲ့ BlueStacks ကို download လုပ်ပါ နှင့် သင့်ရဲ့ PC မှာ BlueStacks install.
သငျသညျလုံးဝဟာ executable BlueStacks ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့, ထို့နောက်ဖြည့်စွက်ရန်မိနစ်အနည်းငယ်ယူတံ့သော installation ကိုဖွင့်ဖို့ဖိုင်ပေါ်တွင်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
သငျသညျရိုးရှင်းစွာမြင်ကွင်းပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ အောက်တွင်သင်သည်သင်၏ PC ဒါမှမဟုတ် Laptop ကိုအပေါ်ကိုအောင်မြင်စွာ BlueStacks တပ်ဆင်ရန်အကူအညီဖြစ်စေနိုင်သော installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှအ screenshots များဖြစ်ကြသည်။
သင်တစ်ဦးရှိသည်ဖို့လိုအပ် BlueStacks အကောင့် အဆိုပါသုံးစွဲဖို့ BlueStacks App ကို Player ကို သင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ် Laptop ကိုအပေါ်။
BlueStacks အကောင့်နှင့်အတူသင် join ပါလိမ့်မယ် BlueStacks အသိုင်းအဝိုင်း, chat နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆော့ကစား, အထူးကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံရရှိအပေါင်းတို့နှင့်အတူ devices များရန်သင့် settings ကိုထပ်တူပြုပါ။
ရိုးရှင်းစွာအ, "Google ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရန်" ပေါ်တွင် click လုပ်
သငျသညျ BlueStacks သို့အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်သင့်ရှိပြီးသား Google အကောင့်ကိုအသုံးသို့မဟုတ်အသစ်တဦးတည်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ထို့နောက်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဒေတာကြည့်ရှုရန်သင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာခွင့်ပြု click နှိပ်ဖို့ရှိသည်။ စိတ်မပူပါနဲ့ဘာမှမရှိပါ။
သင်၌ logging ပြီးနောက်အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပွားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဆိုပါ BlueStacks ခံစားကြည့်ပါ
သင်တို့အဘို့ကိုအသုံးပြုရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ဘာသာစကားကို select လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ် BlueStacks ပြီးတော့အကြောင်း, ဒါကြောင့်အပေါ်ရရှိနိုင်သော BlueStacks အပေါင်းတို့နှင့်အတူ apps များနှင့်ဂိမ်းများကိုခံစားဖို့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်။
Tags: BlueStacks 1, BlueStacks 2, BlueStacks App ကိုကစားသမား, BlueStacks ပြတင်းပေါက်အဘို့ကို download လုပ်ပါ 10, BlueStacks ပြတင်းပေါက်အဘို့ကို download လုပ်ပါ 8, ပြတင်းပေါက်အဘို့အ BlueStacks, ပြတင်းပေါက်အဘို့အ BlueStacks 10, ပြတင်းပေါက် 10 64 နည်းနည်းများအတွက် BlueStacks, ပြတင်းပေါက် 10 64 bit နဲ့အော့ဖ်လိုင်း installer ကိုအဘို့အ BlueStacks, ပြတင်းပေါက်အဘို့အ BlueStacks အခမဲ့ download 8, ပြတင်းပေါက် 8.1 64 နည်းနည်းများအတွက် BlueStacks, ပြတင်းပေါက်အဘို့အ BlueStacks အခမဲ့ download 8.1, ပြတင်းပေါက်အဘို့အ BlueStacks အခမဲ့ download 7, BlueStacks အပြည့်အဝဗားရှင်းအခမဲ့ download, BlueStacks တပ်ဆင်ခြင်း, BlueStacks installation ကိုလမ်းညွှန်, BlueStacks နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း, BlueStacks အော့ဖ်လိုင်း installer ကို, BlueStacks ဟောင်းဗားရှင်း, BlueStacks WhatsApp download,, ပြတင်းပေါက်732 နည်းနည်းအဘို့ကို download BlueStacks, အခမဲ့ BlueStacks ကို download လုပ်ပါ, pc ပေါ်မှာ BlueStacks install ဖို့ဘယ်လို, ပြတင်းပေါက်အပေါ် BlueStacks install ဖို့ဘယ်လို 10
24 မှာ 04 / 2018 / 7: 55 နံနက်
ကျနော်တို့မျှသာအွန်လိုင်းအများအပြားအထူးပြုဥပမာထောက်ခံမှုအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပင့်ကူအိမ်အပေါ်မတူကွဲပြားအကျိုးရှိအချက်အလက်များ၏ကြီးမားနံပါတ်များရှိပါတယ် http://sunrisenm.com/index.php/products ဒီနေ့ခေတ်ကယ့်ကို။ ငါသည်လည်းမျက်မှောက်၌စစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်သင့်အားအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်နုတ်သဘောထားကိုဖြစ်ပါတယ်။
28 မှာ 04 / 2018 / 9: 40 နံနက်
သင်ရုံအွန်လိုင်းအချို့သောအထူးပြုဥပမာရှာရပေမည်။ တကယ်ပင့်ကူအိမ်ရည်ညွှန်းအပေါ်မတူကွဲပြားမည်မျှပင်အချက်အလက်များ၏မုဒ်ဒရာဒီရက်ရှိပါတယ်။ ငါသည်လည်းဒုတိယသငျသညျအထဲကကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်နုတ်အရာဖြစ်၏။
01 မှာ 05 / 2018 / 4: 43 နံနက်
ကျနော်တို့ဂုဏ်အသရေကိုကြည့်မယ့်အစားအတော်ကြာအထူးပြုလမ်းညွှန်များအွန်လိုင်းနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ကွန်ယက် autodata338today အပေါ်မတူကွဲပြားအကျိုးရှိအချက်အလက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ငါသည်လည်းထွက်စစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်သင့်အားထောက်ခံနိုင်ပါ။ ဒါဟာအမှန်နုတ်စိတ်ခံစားမှုကို attachment ဖြစ်ပါတယ်။
03 မှာ 05 / 2018 / 5: 01 နံနက်
သူတို့ဟာမျှသာအွန်လိုင်းအများအပြားအထူးပြုဥပမာထောက်ခံမှုအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ယနေ့ con ချိန်းတွေ့၏အဆိုပါပင့်ကူအိမ်လက္ခဏာတွေပေါ်ထူးခြားသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအချက်အလက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ငါသည်လည်းမှာကျယ်ပြန့်တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုတဦး \_ 's လက်ကြိုးစားကြရန်သင့်အားဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်ငရုတ်သီးသဘောထားကိုဖြစ်ပါတယ်။
21 မှာ 05 / 2018 / 5: 01 နံနက်
Никтотакнеинтересуетсямикронаушниками, какстуденты။ Производствомикронаушников, думается, былоориентированоименнонаэтотизобретательныйитворческийкласс, которомулюбойценнойнадосдатьэкзамен (инеодин!), подробнеечитайтенасайте
13 မှာ 06 / 2018 / 1: 17 ညနေ
17 မှာ 06 / 2018 / 10: 35 နံနက်
ငါ wordpress ကိုသုံးပါနှင့်ငါယုံကြည်လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။